स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी ! – Etajakhabar
स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी !
ताजा खबर:- स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी ! स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी ! स्वयम्भुको महाचैत्य परिसरमा एउटा ढुंगा अस्वभाविक रुपमा तातेको छ । भुईंमा छापिएको ढुंगामा अस्वभाविक तातो आएपछि यसको बारेमा अनेकन चर्चा र अड्कलबाजी भइरहेको छ । सो ढुंगालाई छोएर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । धेरैले यसलाई दैवीशक्तिसँग जोडेर चर्चा गरिरहेका छन् । किन एउटा मात्रै ढुंगा तात्यो भन्ने प्रश्न सबैको छ । मंगलबार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली नै ढुंगा तात्नुको रहस्य पत्ता लगाउन स्वयम्भु पुग्यो । भूगर्भ विभागका उपसचिव सुरेस श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले ‘ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ रडार’ लगाएर जाँच गर्‍यो । जमिनमुनि के भइहरेको छ भनेर अध्ययन गर्न यो रडार प्रयोग हुन्छ । विभागले त्यहाँ कुनै इलेक्टि्रक ‘सर्ट सर्किट’ भएको अनुमान गरेको थियो ।
तर, परीक्षणमा भने रडारले त्यहाँ कुनै ‘सर्ट सर्किट’ भएको देखाएन । जसका कारण ढुंगा तात्नुको रहस्य अझै गर्भमै रह्यो । ‘हामीसँग भएको रडारले त्यहाँ कुनै संकेत देखाएन । अब के भएको हो भन्ने बुझ्न उत्खनन नै गर्नुपर्छ’ उपसचिव श्रेष्ठले भने,’एक दिन सो क्षेत्रको विजुली कटाएर पनि जाँच गर्न सकिन्छ । छलफल गर्दैछौं ।’ पुरतात्विक महत्वको क्षेत्र भएकाले उत्खनन गर्न पुरातत्व विभागको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वम्भुको अनन्तपुरर महाचैत्यको बीचमा तातेको ढुंगालाई इटाले घेरिएको छ । स्वयम्भुमा अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ । अनन्तपुर, प्रतापपुर र शान्तिपुर मन्दिर निर्माणको क्रममा छन्
स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी ! स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी ! स्वयम्भुको महाचैत्य परिसरमा एउटा ढुंगा अस्वभाविक रुपमा तातेको छ । भुईंमा छापिएको ढुंगामा अस्वभाविक तातो आएपछि यसको बारेमा अनेकन चर्चा र अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
सो ढुंगालाई छोएर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । धेरैले यसलाई दैवीशक्तिसँग जोडेर चर्चा गरिरहेका छन् । किन एउटा मात्रै ढुंगा तात्यो भन्ने प्रश्न सबैको छ । मंगलबार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली नै ढुंगा तात्नुको रहस्य पत्ता लगाउन स्वयम्भु पुग्यो । भूगर्भ विभागका उपसचिव सुरेस श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले ‘ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ रडार’ लगाएर जाँच गर्‍यो । जमिनमुनि के भइहरेको छ भनेर अध्ययन गर्न यो रडार प्रयोग हुन्छ । विभागले त्यहाँ कुनै इलेक्टि्रक ‘सर्ट सर्किट’ भएको अनुमान गरेको थियो ।
तर, परीक्षणमा भने रडारले त्यहाँ कुनै ‘सर्ट सर्किट’ भएको देखाएन । जसका कारण ढुंगा तात्नुको रहस्य अझै गर्भमै रह्यो । ‘हामीसँग भएको रडारले त्यहाँ कुनै संकेत देखाएन । अब के भएको हो भन्ने बुझ्न उत्खनन नै गर्नुपर्छ’ उपसचिव श्रेष्ठले भने,’एक दिन सो क्षेत्रको विजुली कटाएर पनि जाँच गर्न सकिन्छ । छलफल गर्दैछौं ।’ पुरतात्विक महत्वको क्षेत्र भएकाले उत्खनन गर्न पुरातत्व विभागको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वम्भुको अनन्तपुरर महाचैत्यको बीचमा तातेको ढुंगालाई इटाले घेरिएको छ । स्वयम्भुमा अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ । अनन्तपुर, प्रतापपुर र शान्तिपुर मन्दिर निर्माणको क्रममा छन् ।इखोजखबरबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १०, २०७४ समय: ०:५९:०१
नस्लवादको आरोप र आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै जर्मनीका स्टार मेसुट ओजिलले लिए अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
शुरु भयो हिमानीको साउने ब्रत! पुगिन् छोराछोरीको साथमा पशुपतिनाथ (भिडियो)
शुरु भयो हिमानीको साउने ब्रत! पति पारसका लागि साउने ब्रतमा हिमानी, पुगिन् छोराछोरीको साथमा (भिडियो)
गायिका इन्दिरा जोशीको 'नसाको म मातमा परी' भन्ने गीतमा नायिका प्रियका कार्कीले दिईन अहिले सम्मकै बोल्ड सीन !
७ पढेको, ८ पढेको, १० पढेको व्यक्तिलाई के भनौं र खै ? भन्दै देशमा आगो वल्छ भन्ने पूर्वप्रधानन्याधिस शुसिला कार्कीलाई सांसद नविना लामाको कडा जवाफ
बनेपा धुलिखेल सडकखण्ड अवरुद्ध, आक्रोशित स्थानीयले लगाए ट्रिपरमा आगो
पल शाह र सुमि मोक्तानकाे ‘डम्फुमा सेलो’ सार्वजनिक भयाे (भिडियोसहित)
जापानमा बाढीपछि गर्मी, तातो हावाले ३० जनाको मृत्यु, तापक्रम अनासायै बढेपछि व्यक्तिहरुलाई अनावश्क रुपमा घाममा नजान देशभर सूचना जारी
साउनको पहिलो सोमबार आज आषाढ शुक्ल एकादशीसमेत परेपछि पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा भक्तजनको घुइचो
आज साउनको पहिलो सोमबारका दिन झापाका दर्जनभन्दा बढी शिवालय मन्दिरमा बिहानैदेखि जल चढाउने दर्शनार्थीको घुइँचो